SIDA LOO GOOYO CANABKA LAGA BILAABO CALEEMAHA AAN LOO BAAHNAYN XAGAAGA - CANAB
Sida loo gooyo canabka laga bilaabo caleemaha aan loo baahnayn xagaaga
Geedka canabku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daryeelidda dhirta.
Waxaa si gaar ah muhiim ugu ah gobollada xagaaga oo gaaban yahay, canabku ma helayaan qorraxda ku filan si ay ugu fiicnaato.
Ma suurtagal in la gooyo canab xagaaga
Faa'iidada aan la iska qaadin ee canabka ee kudubka xilliga xagaaga waa in geeddi-socodkani uu ka caawiyo in si weyn loo kordhiyo tirada iyo hagaajinta tayada dalagga.
hawada iyo qorraxda uureysiga ugxan-yar;
ilaalinta cudurada iyo cayayaanka;
tilmaamaha awooda ee burushyada;
abuurka baadiyaha sanadka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, casharkan wuxuu leeyahay dhibaato: waa inay sameeyaan xilliga oo dhan.
Waa muhiim! Manjooyin xagaaga ah ayaa lagula talinayaa inay sameeyaan aagga cimilada dhexe, maaddaama ay halkan joogaan in xayawaanku ay ku dhacaan la'aanta iftiinka iyo kuleylka.
Waqtiga timaadda ee manjooyin
Daaweynta canab ee xilliga xagaaga waxaa lagu fuliyaa saddex marxaladood: ka hor iyo ka dib ubax iyo inta lagu jiro fruiting. Hawlgalku wuxuu bilaabmaa Juun wuxuuna soconayaa ilaa dhammaadka bisha Ogost.
Fiiri manjooyin guga iyo dayrta canab.
Ka hor inta ubax
Ka hor inta ubax, caleemaha waa la gaabin, tegaayo oo kaliya qaybta fruiting - taasi waxay hubisaa soo saarista goosashada soo socda. Kusoo baxa wuxuu joojiyaa kobcinta, walxaha waxtarka lehna waxaa loo diraa qalabka lagu dhajiyo inflorescences. Hawlgalladan waxaa lagu fuliyaa dabayaaqada May-horraan Juun.
Ka dib markii ubax
Ka dib markii ubax, rucubood canab ah ayaa la sameeyay, iyo waqtigan xaamilada bilaabaan inay koraan, qaadashada xoog badan oo xoog iyo nafaqo ka soo baadiyaha. Dalagyada marxaladani waa inay ka saaraan tallaabooyinkan. Tani waxay sababtaa, canabku wuxuu helayaa helitaanka iyo ka sii weynaanta iftiinka qorraxda. Inta lagu jiro muddadan, qaabka heesaha waxaa sidoo kale loo isticmaalaa: giraanta godka 1-3 mm qaro weyn ayaa laga saaraa jiritaanka miraha. Thanks to farsamadan, waxaad heli kartaa goosashada laba toddobaad ka hor.
Waa muhiim! Nidaamkaan laguma talin karo sanad walba, sababtoo ah waxay aad u xanuun badan tahay dhirta.
Inta lagu jiro fruiting
Waxaa lagama maarmaan ah in la dhajiyo geedkii xilliga firaaqada. Hadafku waa in la kordhiyo helitaanka qorraxda iyo hawada si ay ufududaystaan.
Sidoo kale baro sida loo sameeyo hawlaha dayrta iyo quudinta canab si ay u ilaaliso dalagga.
Kajirinta baadiyaha waxay ka bilaabataa madaxa, ka dibna u tag caleemaha on gacmaha. Wixii farsamada saxda ah, waxaa aad muhiim u ah in la raaco xeerarka manjooyin iyo helitaanka qalab wanaagsan haddii loo baahdo.
Xilliga kuleylka, ama cagaarka, hannaanka haraaga ayaa lagu sameeyaa gacanta. Laakiin mararka qaarkood caawinta qalabka jarida ayaa loo baahan yahay.
Hawlgallada waxay isticmaalaan saddex nooc oo qalab:
Sunnayaasha - qalabka ugu caansan, oo siinaya xaleef tayo sare leh;
mindiyo gaar ah - serpetki; qalabkan suuxdinta leh ayaa si tartiib tartiib ah u noqda mid aan la daboolin sababtoo ah asal-qabashada;
boodada canab, jajabyo.
Xeerka ugu muhiimsan ee xulashada qalabka waa fiiqitaankooda. Ka hor inta aanad bilaabin shaqada, hubi qalabkaaga, xoqin haddii ay lagama maarmaan noqoto, si looga fogaado dhaawaca baadiyaha.
Ma taqaanaa? Canab - Mid ka mid ah dhirta ugu horreysa ee ay samaysay nin 5-6 kun oo sano oo BC. er
Hubi in dhammaan boogaha iyo qaybaha ay yihiin kuwo siman oo ku yaal gudaha gudaha asliga ah. Haddii xaleefku ka yimaado dhinacyo kala duwan, waxay horjoogsan doontaa dhaqdhaqaaqa casiirka iyo, marka loo eego, yareeyo dhalidda. Sannadaha kowaad iyo labaad ee fruiting, xitaa laamihii leh clusters waxaa la gooyaa duurka, tega kaliya hal. Haddii aadan raacin xeerkan, dhirta ma laha awood ku filan oo midho kulul ayaa joojin karta.
Daryeelka xagaaga ee beerta canabka ah
Canab dhoobo xagaaga ayaa ku lug leh dhowr geedi socod. Dhammaantood waxaa loogu talagalay hagaajinta beergooyska, laakiin waxay qabataa waqtiyo kala duwan
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaatid sida loo koro canabta dhagaxa.
Waxaa loo qaybiyaa "qalalan" iyo "cagaar". "Qoryaha qalalan" waxay xiranayaan geedka canabka ah ee sannadkii hore si ay u waydiiso jihada koritaanka. Soo saar horraantii Juun. Green Garter waxaa la sameeyaa inta lagu jiro xilliga xagaaga. Markay koraan, caleemaha waxay ku xiran yihiin trellis.
Gardarrada waxaa badanaa la sameeyaa ka hor inta ubax si ay u kiciyaan fruiting. Iyadoo loo marayo habkan, koritaanka caleemaha ayaa la joojinayaa. Qeybta cidhiidhiga ah ee geedka canabka ah oo ku saabsan 10 cm, inta kale ee caleemaha la socdo laba farood.
Ma taqaanaa? Canabku waxay ku dhowyihiin caanaha marka la eego cuntooyinka nafaqada, marka laga reebo dufan.
Waxay ka kooban tahay in ay ka saarto llorescences ee amarka ugu horeeyay ee noocyo leh gacmo yar yar iyo inflorescences ee amarrada saddexaad iyo afaraad ee noocyo kale. Natiijo ahaan, miraha waxay ka badan yihiin macaan iyo weyn. Dhulkeena, badanaaba 1-2 kooxood ayaa ka haray biqil, iyo canabkii yaraa ee dibedda laga saaray. Qaliinka waxaa la sameeyaa horraantii Agoosto, halka miraha ay yar yihiin.
Daaweynta canab ee xagaaga waa jimicsi caadi ah, laakiin ma aha mid aad u adag. Goosashada qani ku ah dhammaadka xilli-ciyaareedka ayaa hubaal ka dhigaysa in ay xayiraan dhammaan kharashka shaqada.